Dr. Patrick Young, Onye edemede na ntọala - peeji nke 37 nke 37
Kedu ka ngwa ngwa Cialis ntụsi na-esi arụ ọrụ na oge ole ka ọ na-eme ka ọ bụrụ na ọ na-eme ngwa ngwa karịa ọgwụ ndị ọzọ ED, na mmalite nke ịdị irè n'ime oge 30. Ntuziaka bụ iwe Celineis ntụ ntụ 30 nkeji tupu oge mmemme, mgbe ya na Levitra, ndị ọrụ na-agwa ha ka ha were oge 60 ọgwụ [...]
Dr. Patrick Young dere na Cialis, tadalafil na 1 Comment .
Ogologo oge ole ka Cialis 20mg ga-arụ ọrụ? Kedu Cialis? bụ aha ahia maka ọgwụ a na-akpọ. Cialis bụ otu n'ime ọgwụ ndị a maara dị ka PDE-5 (ndị na-eme ihe na-eme ka ụdị phosphodiesterase type 5). Cialis na ndị ọzọ na-emepụta PDE-5 nwere ike inyere ndị ikom aka na-enweghị ihe ọkpụkpụ (nkwarụ) site na ịmepụta erectile [...]
Kedu ihe bụ yohimbine na otu esi arụ ya?
Dr. Patrick Young dere na Ihe omumu ahia .
Kedu ihe bụ yohimbine na otu esi arụ ya? Kedu ihe bụ yohimbine? Yohimbine bụ ụdị ngwaahịa., Nke a na-ewu ewu n'etiti ebe ndị na-ewu ahụ. Ọ na-agbaghasị ọbara ọbara ma na-eme ka ọbara na-abawanye na penis, nke na-enyere aka melite ọrụ erectile.N'ihi na a jirila ọtụtụ narị afọ rụọ ọrụ dị ka aphrodisiac na ime ka nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ ahụ ike na ịdị ike, na [...]
Dr. Patrick Young dere na Testosterone cypionate na 2 Comments .
Na mpaghara ahụ na-ere ọkụ, a na-ere ahịa steroid-Testosterone Cypionate ntụ ntụ, nke na-enyere aka ịzụlite ahụ ike na ike ọkpụkpụ, na-ejikwa maka abụba ọnwụ na inwe mmekọahụ. Ndị mmadụ na-azụkarị Testosterone Cypionate ngwaahịa site na ntanetị n'ịntanetị. ịzụta steroids raw ntụ ntụ n'ihi na ọnụ ala ya ma ọ bụghị ọrụ nhazi ụzọ siri ike. Taa anyị nọ ebe a ịkọrọ [...]
Ngwurugwu Steroid na iwu: Iwu ma ọ bụ iwu na-akwadoghị
Dr. Patrick Young dere na ndị steroid .
Ọ bụrụ na ị na-achọpụta na ị na-eme ka ị na-eme ka ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị na-eme ka ọ bụrụ na ị ga - . Ha na-anabolic ma na-amụba protein n'ime mkpụrụ ndụ, karịsịa na akwara skeletal, na [...]